समाज Archives - BBC Taja khabar
निर्मला पन्त हत्या प्रकरणः विष्टसँगै बम दिदीबहिनी पनि छुटे
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका दिलिपसिंह बिष्ट रिहा भएका छन् । बिष्टसँग बम दिदीबहिनी पनि रिहा भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुलाई जिल्ला अदालत कञ्चनपुरले साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । १४ वर्षीय रोशनी बमलाई साधारण तारेखमा छाडिएको छ […]
विपश्यना ध्यान गर्नेहरुले यो कथा बिर्सनै सक्तैनन्ः कथामा एक महिलाको बुढेसकालमा छोरो जन्मन्छ । छोरो जन्मेको केही समय नबित्दै उनका श्रीमानको मृत्यु हुन्छ । वरवर आफन्तको नाउँमा कोही हुँदैन । बाँच्ने साहाराको नाउँमा एउटै छोरो हुन्छ । छोरो नै उनको मुटुको धड्कन ! एक दिन त्यो छोरोलाई हनहनी ज्वरो आउँछ र एकैदिनको ज्वरोले छोराको मृत्यु हुन्छ […]
बिहिबार २३ कार्तिक, २०७४
घरमा श्रीमती हुँदाहुँदै गर्लफ्रेन्ड बनाएर डुल्ने को ? ‘फोर जी’को जमनामा ब्रत बसेर भर्जिन पत्नि पाइन्छ भनेर कोही भगवान आएर मेरो कानमा सुनाए भने राम–राम म एक महिनासम्म पानी पनि नपिइ ब्रत बस्ने थिएँ ।’एकजना युवकको यो स्टाटस पढेर मनमा धेरै कुरा उम्रिए । दिमागमा कुरा खेलेपछि कलमको साहारा लिन बाध्य भएँ । मनमा कुरा […]